Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qeybta Shiinaha | KAIHUA
Series Taxanaha Carruurta
Qeybta qoysku waxay leedahay awood wax soo saar sanadle ah oo ah 300-500 nooc oo wasakhahaasi ah, oo leh waqti dhalis deg deg ah iyo kharash tartan ah. Inta badan wasakhahaasi waxaa loo sameeyaa miis iyo kursi, sanduuqa keydinta, kabadhka, dambiisha dharka lagu dhaqo, alaabta carruurtu ku ciyaarto iwm Adoo yaqaana sida loo yareeyo waqtiga wareegga, sida loo yareeyo miisaanka iyo sida loo sameeyo alaab wanaagsan oo xoog leh, ayaa caaryaheena waxay keeni karaan qiime aad u weyn macaamiisheenna.
Iyada oo awood wax soo saar sanadle ah oo ka baxsan 1,600 nooc, in ka badan 650 shaqaale, oo daboolaya aag 42,000 mitir murabac ah, saldhigga Huangyan wuxuu u qaybsan yahay afar qaybood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta Saadka, Qaybta Caafimaadka, Qaybta Gawaarida, Qaybta Qoyska iyo qaybta qalabka guryaha.
Iyada oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo ka baxsan 900 qaybood, in ka badan 500 oo shaqaale ah, oo daboolaya aag dhan 36,000 oo mitir murabac ah, Sanmen base waxay ku takhasustay soo saarida wasakhda baabuurta ee nidaamka dibedda, nidaamka gudaha iyo nidaamka qaboojinta.
Kooxda waxsoosaarka waxay ka kooban yihiin aqoon isweydaarsiga mashiinka, aqoon isweydaarsiga shirarka, aqoon isweydaarsiga dhibcaha, aqoon isweydaarsiga iyo aqoon isweydaarsiga. Dhammaan kooxda wax soo saarka, waxaa jira in ka badan 30% farsamo yaqaanno loo siiyay abaalmarin ahaan farsamo-yaqaanno dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah Intaa waxaa dheer, farsamayaqaanno kuwaas oo in ka badan 10 sano khibrad u leh in ka badan 20%.
Kooxda Mashiinka: waxay ka kooban yihiin makiinado qallafsan, mishiinka nusqaanta ah, mashiinada saxda ah, 5-dhidibka machining center, barnaamijyada iyo kooxaha kale. Aqoon isweydaarsiga oo dhan wuxuu daboolayaa qaboojiyaha. Dhamaan howshu waxay ku jirtaa gacanta ERP.
Kooxda Golaha: dhammaan sameeyayaasha caaryadu waxay diiradda saari karaan sameynta caaryada ay ku wanaagsan yihiin. Isku celceliska waayo-aragnimada soo-saaraha caaryada ayaa ka badan 20 sano.
Kooxda dhibcaha: Mashiinka 100T-500T ee dhibcaha, hawl wadeenadu waxay si buuxda u fahmeen mabda'a dhibcaha, sida loo xakameeyo dhibcaha.
Kooxda nadiifinta: oo leh xiriir qotodheer kooxda kooxda, waxay yaqaanaan sida loo gaaro shuruudaha nadiifinta ee noocyada kala duwan ee alaabada, xitaa heerka muraayadda muraayadda.
Kooxda duritaanka: waxaan haynaa mashiinno cirbadeysan oo laga heli karo 120T-3300T, oo leh aalado, soojiidashada magnet iyo isku-haynta hawo-gelinta. Hawl wadeenadu waxay tijaabin karaan xaaladaha ku dhow xaaladaha wax soo saarka dhabta ah iyo xitaa ka badan xaaladaha wax soo saarka dhabta ah, si ay macaamiishayadu ugu oggolaadaan tixraacyo wanaagsan.
Hore: Qaybta Qalabka Guriga
Xiga: Qaybta Gawaarida